Farmaajo oo loo caleemo-saaray madaxweynaha 9-aad ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaFarmaajo oo loo caleemo-saaray madaxweynaha 9-aad ee Soomaaliya
Farmaajo oo loo caleemo-saaray madaxweynaha 9-aad ee Soomaaliya[Xigashada Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Arbaco ah loo caleemo-saaray madaxweynaha 9-aad ee Soomaaliya.
Munaasabada caleemo-saarka ayaa lagu qabtay goobta Afisyoone ee gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Khudbadiisii, waxa uu balanqaaday in uu soo celin doono haybadii iyo karaamadii dadka Soomaaliyeed.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 8-dii bishaan Febaraayo Farmaajo u doortay madaxweynaha dalka.
Hoggaamiyaasha dowladaha deriska la ah dalka Soomaaliya oo ay kamidyihiin Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, Raysulwasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn iyo Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa kasoo qaybgalay caleemo-saarka madaxweynaha cusub.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa Madaxweynaha cusub ka filaya in uu wax ka qabto ammaan la’aanta iyo xaaladaha dhaqaale xumo ee dalka ka jira.
Farmaajo waxa uu xafiiska hayn doonaa muddo afar sanno ah, sida uu qorayo dasruurka federaalka Soomaaliya.
March 8, 2017 Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo qaabilay safiirka Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya iyo Kenya